Abavelisi abaqhelekileyo base-US kunye nabanikezeli-China iMveliso yaseMelika yaseMelika
Ukwandiswa kobushushu beBrex PEX lokulinganisa- iF1960 esemgangathweni yimveliso ethandwayo eMntla Melika. Uyilo olugqwesileyo, zilungele zombini ufakelo olufihliweyo nolufihliweyo.
Ubukhulu: 3 / 8PEX 1 / 2PEX 5 / 8PEX 3 / 4PEX 1PEX 11 / 4PEX 11 / 2PEX 2PEX
Brass Pipe Lokulinganisa ke iimveliso eziphambili inkampani yethu, sinako ukubonelela ODM kunye OEM nobhedu umbhobho efanelekileyo.
Ubukhulu: 1/8 3/8 1/2 3/4 1 11/4 11/2 2
Uhlobo lomtya: FIP MIP
Ukuxinwa kweBrass Ukulinganisa i-USA nako kusetyenziswa eMntla Melika. Umbhobho wobhedu oyindoda olungele umbhobho wegesi olungelelanisa izixhobo zokudibanisa ngokukhawuleza.
Ubukhulu: 1/8 3/8 1/2 3/4